နှစ်သက်မိသော မျက်ရည်များ | MoeMaKa Burmese News & Media
6 Responses to နှစ်သက်မိသော မျက်ရည်များ
Mon on March 1, 2012 at 12:25 pm
Many youths in Burma were like you, but it’s not too late, right?? to see the truth!!!
ခင်မြတ်ဆွေ on March 1, 2012 at 4:25 pm
“နိုင်ငံရေးများ သွားမစလေနဲ့။ ဘ၀ပျက်သွားမယ် ဘာမှတ်နေလဲ”ဆိုပြီးကိုယ်တိုင်လဲ
ကင်းအောင်နေ၊ကိုယ့် မျိုးဆက်အသိုင်းအဝိုင်းကိုလဲနိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းအောင်၊
ငယ်ငယ်ထဲကပုံစံသွင်းဖြတ်သန်းခဲ့ ကြသူတွေကတော့ အများကြီးပါ၊ လူတိုင်းဟာကိုယ့်အကျိုးစီးပွားပျက်မှာကိုတော့ ကြောက်ကြတဲ့ သူတွေကြီးပါဘဲ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ အနစ်နာခံတော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့ လို့ ဗမာပြည်လွတ်လပ်ခဲ့ တာတော့ 
သင်ဘူးမှာပါနော်၊ ဒီလိုဘဲအခုအချိန်မှာမင်းကိုနိုင်တို့ ကိုကိုကြီးတို့ လိုမရေတွက်နိုင်တဲ့ 
လုပ်နေကြတယ်၊ ရှင်မို့ လို့ ပြောရက်တယ်နော်၊ဲ
သူများမျက်ရည်ကျတာထပ်ကြည့် ချင်သေးတယ်လို့်၊ ကိုကိုကြီးလိုလူမျိုးမျက်ရည်ကျတာ
မြင်တော့ စစ်အစိုးရကိုကျမကတော့ ပိုပြီးနာကျဉ်းတယ်၊ကျမကတော့ ဘာအပစ်မှမရှိတဲ့ 
လူတော်လူကောင်းတွေထပ်ပြီးမျက်ရည်ကျဖို့ ကြုံနေရတဲ့ အဖြစ်တွေ၊ ဗမာပြည်မှာ
မရှိသင့် တော့ ဘူးလို့ ထင်တယ်၊ကျမအမြင်ကတော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာလိုအပ်ရင်
ဆန္ဒပြသင့် လဲပြရမယ်၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်သင့် လဲတိုက်ရမယ်၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း
ဆွေးနွေးလို့ ရရင်လဲဆွေးနွေးရမယ်၊ ဒါဟာတော်လှန်ရေးသမားတွေရွေးချယ်ခြင်လို့ 
ရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူး၊ စစ်အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်ကဖန်တီးခဲ့ လို့ ဒီလမ်းကို
လျှောက်အောင်တွန်းပို့ ခဲ့ လို့ ဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာစာများများဖတ်၊သမိုင်းကိုလေ့ လာ၊
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကလေးနဲ့ တွေး ပေးမယ်ဆိုရင်ရှင်အမှန်တရားတွေကိုမြင်လာမှာပါ၊
ကျမကတော့ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်လုပ်နေသူတိုင်းကိုလေးစားတယ်….
သွေးနိုင် on March 1, 2012 at 10:10 pm
မခင်မြတ်ဆွေက စာရေးတဲ့ ကိုဖိုးထက် ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို မရဘူးဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်။ သူ မြန်ချင်တဲ့ မျက်ရည်က ဘယ်လို မျက်ရည်လဲဆိုတာ ဆောင်းပါးကို သေချာ ပြန်ဖတ်ရင် သိပါတယ်။ သူက ရိုးရိုးသားသား နိုင်ငံရေးနဲ့ ဝေးတယ်လို့ ၀န်ခံနေပေမယ့် ဒီလူက နိုင်ငံရေးနဲ့ ဝေးအောင် နေ နေတဲ့ သူမဟုတ်တာ ဒီဆိုဒ်မှာ သူ့စာတွေ ပြန်ဖတ်ရင် တွေ့ရမှာပါ။ အရေးကြီး ဆောင်းပါးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်ကို ခံစားမှု တစ်ခုအနေနဲ့ ချပြသွားတာထက် ပိုအရေးပါတဲ့ ဆောင်းပါးတော့ မဟုတ်ဘူးထင်တာဘဲ။ သူရေးပုံ၊ တွေးပုံတွေက စာမဖတ်တဲ့ ၊ သမိုင်းကို မလေ့လာတဲ့ လူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ လူအများစုက ကိုယ်ကျိုးမစွန့်နိုင်ဘူးဗျ။ အာဇာနည်တွေမှ ကိုယ်ကျိုးစွန့်နိုင်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့လိုမျိုး နိုင်ငံရေးကို မြင်တတ်၊ တွေးတတ်တဲ့ နောက်လိုက် လူတွေလဲ လိုတယ်ခင်ဗျ။ စာရေးသူ ပေးချင်တာက တစ်ခြား၊ ဖတ်တဲ့သူက တွေးချင်ရာ စွတ်တွေးပြီး စာဖတ်၊ သမိုင်းလေ့လာဆိုပြီး ဆရာသွားလုပ်နေ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဖိုးထက် စာတွေ ကျနော်စောင့်ဖတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
aa on March 2, 2012 at 5:58 pm
yes . I agree with you. some women are like that. no wonder.
Mon on March 2, 2012 at 6:40 pm
Agree with Thway Naing. We got the message that Ko Phoe Htet wanted to send. We got to admire that his braveness to admit that he was afraid of being involved in politics (when he was very young which is natural) like many people (like us, we didn’t dare to do what they did, right), but it’s much different between the being interested without being involved and without being involved with the self-interest, the greed, and the benefits, right??? We all are interested in our country’s affairs much or less, but we didn’t dare to be involved like the 74, 88, 96 students’ generations and NLD members and Daw Su, and all other ordinary individuals. But there are many Burmese who are making fun of those sacrifices for their own sake. Ko Phoe Htet implies how much he is interested in politics by admiring U Ko Ko Gyi.
This is one of the problems of our Burmese people’s mentality which cannot differ the true colours of what the authors want to say…..I have met many stupid comments at various Burmese affair websites as they did not comprehend what the authors really want to mention (For instance, Director Wyne’s article about academy)…..Poor Burmese authors and writers who have not got right audiences who can perceive the correct message, sometimes….
May on March 4, 2012 at 3:09 pm
I feel really painful in my heart whoever cries (Ko Min Ko Naing, Ko Ko Gyi or any other ones who sacrifice themselves for our country). Personally, I don’t want to see their tear again. I just want to see their smile in the future. I always wish for them to be successful.